आजको राशिफल – मिति २०७४ साल असोज २७ गते नवमी तिथि शुक्रबार - Internet Khabar
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि फाइदा उठाउन केही संघर्ष गर्नुपर्ला। बेलामा होस नपुर्याउँदा अप्ठ्यारा चुनौतीसमेत आउन सक्छन्। तापनि नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। चिताएको काममा आंशिक सफलता मिल्नेछ। दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ। व्यवसायमा राम्रै लाभ हुनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ। पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ।
विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि पहिलेको हरहिसाब नमिल्नाले समस्या पर्ला। ठूलो भागको मोहले समस्या निम्त्याउन सक्छ। तापनि, मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हातलागी हुने सम्भावना छ। व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्नेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ।
चुनौतीपूर्ण कामको दायित्व लिनाले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ला। अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्दा उपलब्धि सोचेजस्तो नहोला। आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउनेछन्। स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभव हुनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिए पनि समस्याप्रति गम्भीर नबन्दा अवसर जोगाउन मुस्किल पर्नेछ। आफ्नै कमजोरीले इष्टमित्र टाढिने सम्भावना रहेकाले सजग रहनुहोला।
परिस्थितिवश चिताएको काम रोकिन सक्छ। कामको मेसो नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। स्वास्थ्य-चिन्ताले सताउला। अध्ययनमा बाधा हुनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ला। विविध समस्याले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएला। नयाँ काम प्रारम्भ गर्न समय प्रतीक्षा गर्नुहोला। – नेपाली पात्रोबाट
वाम गठबन्धनबारे भारतले मुख खाेल्याे
आजको राशिफल, मिति २०७५ साउन ३० गते बुधबार
आजको राशिफल – मिति २०७४ पौष १७ गते चतुर्दशी तिथि सोमबार
आजको राशिफलःमिति बि.सं. २०७५ असार २५ गते सोमबार
भूकम्पले क्षतिग्रस्त राणाकालीन दरबार पुरानै अवस्थामा टिकाइराख्न मुस्किल
राती अबेर खाना खानुहुन्छ ? यस्तो समस्या भोग्नुपर्छ
कोलोम्बिया नयाँ राष्ट्रपति इभानद्वारा सपथग्रहण
अझै रोकिएन टिपर आतंक, फेरी लियो एकजनाको ज्यान
नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई स्वागत गर्न आफैँ एयरपोर्ट पुगे माइकल क्लार्क
न्यायाधीशहरुले कुर्सीमा बस्ने र कागज मात्र केलाउने सोचलाई बदल्नुपर्छ – प्रधानन्यायाधीश